Zimbabwe Vigil band release new songs – Nehanda Radio
On Feb 1, 2013 209
LONDON – For over 10 years activists from the Zimbabwe Vigil have been protesting at the Zimbabwean embassy in London. But did you know the Zimbabwe Vigil also has a band that sings pro-democracy songs?
Zimbabwe Vigil Band release new offering
Members of the Zimbabwe Vigil band (Dumi Tutani and Farai Marema) have released a brand new self-titled album to complement their pro-democracy efforts. In an interview with Nehanda Radio, band member Tutani said:
Oct 19, 2020 15,326
May 5, 2019 18,248
Mar 19, 2018 13,818
Jun 18, 2017 4,625
“This album is dedicated to all human rights activists who have died fighting for justice and human rights in Zimbabwe and the world over. The songs urge activists to carry on the fight against the oppressive regime in Zimbabwe.”
To listen to more Zimbabwe Vigil songs visit Nehanda Radio Soundcloud
Dumi TutaniFarai MaremaVigil YeduZimbabwe VigilZimbabwe Vigil band
Jan 23, 2021 9,517
Jan 23, 2021 24,518
Jan 23, 2021 60,509
Jan 23, 2021 16,017
Jan 23, 2021 19,104
Jan 23, 2021 19,108
Jan 22, 2021 77,356
Jan 22, 2021 45,769
Jan 22, 2021 41,051
Jan 22, 2021 40,889